နယူးစမတ်ဖုန်းဘက်ထရီအားကိုအားသွင်းနိုင် 48% ငါးမိနစ် - သတင်း Rule
နယူးစမတ်ဖုန်းဘက်ထရီအားကိုအားသွင်းနိုင် 48% ငါးမိနစ်
အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “နယူးစမတ်ဖုန်းဘက်ထရီအားကိုအားသွင်းနိုင် 48% ငါးမိနစ်” ရှမွေလသည် Gibbs ကရေးသားခဲ့, theguardian.com တနင်္လာနေ့ 16 နိုဝင်ဘာလအပေါ်များအတွက် 2015 14.44 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
ကြာကြာတစ်ရက်ထက်ကြာရှည်ခံသောစမတ်ဖုန်းဘက်ထရီယခုအချိန်တွင်ဘို့လူအများစု၏လက်လှမ်းမမီထဲကဖြစ်စေခြင်းငှါ,, ဒါပေမဲ့ဖို့ပညတ်ကြောင်းကြီးမားတဲ့တဦးတည်း 48% ငါးမိနစ်အတွင်းလမ်းအပေါ်ဖြစ်ပါသည်.
Huawei ၏အသစ်အစာရှောင်-charging ဘက်ထရီအားသွင်းနိုင်စွမ်း 10 ကြိမ်ပုံမှန်လီသီယမ်အိုင်းယွန်းဘက်ထရီများ၏ထက်ပိုမြန်အသစ်တစ်ခုလျှပ်ကူးပစ္စည်းဒီဇိုင်းကိုအသုံးပြုသည်, ကုမ္ပဏီ၏အဆိုအရသိရသည်.
အဆိုပါဘက်ထရီကို Huawei ပိုင်ဝပ် Lab ကတီထွင်ခဲ့ကြ, နှင့်ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကဂျပန်အတွက် 56 ဘက်ထရီစာတမ်းဖတ်ပွဲမှာသရုပ်ပြခဲ့သည်.
လျင်မြန်စွာ 3,000mAh ဘက်ထရီကိုသရုပ်ပြ charging.
အသစ်ဘက်ထရီဘက်ထရီရဲ့ဘဝတိုသို့မဟုတ်ပါကသိမ်းထားနိုင်ပါတယ်စွမ်းအင်ပမာဏကိုလျှော့ချခြင်းမရှိဘဲဓာတုစွမ်းအင်ကိုထဲသို့ဇယားကွက်ထဲကနေလျှပ်စစ်စွမ်းအင်ကိုကူးပြောင်းတက်အမြန်နှုန်းသော anode သို့ built ဓာတ်ကူပစ္စည်းများ.
ဘက်ထရီအမျိုးအစားနှစ်မျိုးပြသကြ၏. တစ် 3,000 milliampere နာရီ (mAh ဘက်ထရီ) မှတရားစွဲဆိုခံရနိုင်ကြောင်းဘက်ထရီ 48% ငါးမိနစ်နှင့်ဝင်တိုက်တဲ့သေးငယ်တဲ့ 600mAh ဘက်ထရီအတွက် 68% နှစ်မိနစ်အတွက်.
နှိုင်းယှဉ်, Google ရဲ့ Nexus Phablet ကို 6P တစ်ဦး 3,450mAh ဘက်ထရီစဉ်ရှိပါတယ် Apple ရဲ့ iPhone ကို 6S တစ်ဦး 1,715mAh ဘက်ထရီရှိပါတယ်. လက်ရှိအမြန်-charging, ထိုကဲ့သို့သော Qualcomm ၏လျင်မြန်စွာတာဝန်ခံသို့မဟုတ်အသစ်သို့တည်ဆောက်ပိုမြန် charging စွမ်းရည်ကိုအသုံးပြုပြီးသောသူတို့သည်အဖြစ် ကို USB-C ကို connector ကို အပြည့်အဝကြီးတစ်ခုစမတ်ဖုန်းဘက်ထရီကိုအားသွင်းဖို့တစ်နာရီပတ်ပတ်လည်နေရာယူ.
လျင်မြန်စွာ 600mAh ဘက်ထရီသရုပ်ပြ charging.
30496	0 အပိုဒ်, Asia Pacific, ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ, ဂျပန်, မိုဘိုင်းဖုန်းများ, သတင်း, သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေး, ရှမွေလသည် Gibbs, စမတ်ဖုန်း, နည်းပညာ, ကမ္ဘာ့ဖလားသတင်း
← ဘယ်လိုစမတ်အိတ်လေကြောင်းခရီးသွားအသွင်ပြောင်းနိုင် အကောင်းဆုံးကိုအိတ်ထဲ-size စမတ်ဖုန်းငါးခု →